အမောဖောက်ပြီး အောက်စီဂျင်ရှုနေရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ မေပန်းချီ – Cele Snap
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီရဲ့ မိခင်ဟာ အောက်ဆီဂျင် မပြတ်အောင် နေနေရတဲ့ အခြေအနေပါနော်။မေပန်းချီကလည်း မေမေ့ကို ကိုယ်ဖိရင်ဖိ ပြုစုစောင့်ရှောက်နေပါတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင်ရောဂါကူးသွားမှာကိုတောင်မဈိုးရိမျနိုငျဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ဂရုစိုက်ပေးနေ ပါတယ်နော်။
” ကျွန်မဟာ အောက်ဆီဂျင်ခဏပျက်သွားတဲ့ အမေ့အတွက် လေကိုပါစပ်နဲ့ကိုယ်တိုင်မူတ် သွင်းရင်း ကျွန်မကိုယ်တိုင် အောက်ဆီဂျင်ပျက်ပြီးသတိလစ်သလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်မသူငယ်ချင်းဟာ သူကိုယ်တိုင်းဆေးသွင်းရင်းတန်းလန်းနဲ့ သူ့အမေ တဖြည်းဖြည်းအသက်မရှူနိုင်တော့ပဲအဆုံးသတ်သွားတာကိုထိုင်ကြည့်ခဲ့ရတယ်ကျွန်မ မိတ်ဆွေတချို့ဟာ ဆေးရုံပေါက်ဝမှာတင် အသတ်ဆုံးရူံးခဲ့တယ် တချို့ကျတော့ အောက်ဆီဂျင်တန်းစီပေးနေရင်း ငြိမ်သက်သွားကျတာ ကျွန်မ သိချင်တာ ကျွန်မတို့ဘာတွေဖြစ်နေ ကျတာ လဲ ဟင် ?
ဒီစာတွေတင်ရတဲ့အကြောင်းက ဘဝမှာ(#ကူကယ်ရာမဲ့)ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကြီးကိုအခုမှ ကျွန်မကောင်းကောင်းကြီးခံစားနေရလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ အခုအချိန်ထိ အမေ့ရဲ့ညည်းသံအောက်မှာ ကျွန်မနှလုံးသားတွေ တစ စီကြေမွ”” ဖြတ်သန်းရတဲ့အခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေ(၇)ရက်သားသမီးအားလုံးမကြုံရပါစေနဲ့😭🙏🏼🙏🏼အမေ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မမြင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေ” လို့ ဝမ်းနည်းစရာအခြေအနေတွေကို မခံစား နိုင်တော့လို့ Facebook ပေါ်မှာ ရင်ဖွင့်ထားပါ တယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မပေနျးခြီရဲ့ မိခငျဟာ အောကျဆီဂငျြ မပွတျအောငျ နနေရေတဲ့ အခွအေနပေါနျော။မပေနျးခြီကလညျး မမေကေို့ ကိုယျဖိရငျဖိ ပွုစုစောငျ့ရှောကျနပေါ တယျနျော။ ကိုယျတိုငျရောဂါကူးသှားမှာကိုတောငျမစြိုးရိမနြိုငဘြဲ အတတျနိုငျဆုံး ဂရုစိုကျပေးနပေါ တယျနျော။
” ကြှနျမဟာ အောကျဆီဂငျြခဏပကျြသှားတဲ့ အမအေ့တှကျ လကေိုပါစပျနဲ့ကိုယျတိုငျမူတျ သှငျးရငျး ကြှနျမကိုယျတိုငျ အောကျဆီဂငျြပကျြပွီးသတိလဈသလိုဖွဈခဲ့ရတယျကြှနျမသူငယျခငျြးဟာ သူကိုယျတိုငျးဆေးသှငျးရငျးတနျးလနျးနဲ့ သူ့အမေ တဖွညျးဖွညျးအသကျမရှူနိုငျတော့ပဲအဆုံးသတျသှားတာကိုထိုငျကွညျ့ခဲ့ရတယျကြှနျမ မိတျဆှတေခြို့ဟာ ဆေးရုံပေါကျဝမှာတငျ အသတျဆုံးရူံးခဲ့တယျ တခြို့ကတြော့ အောကျဆီဂငျြတနျး စီပေးနရေငျး ငွိမျသကျသှားကတြာ ကြှနျမ သိခငျြတာ ကြှနျမတို့ဘာတှဖွေဈနေ ကတြာလဲ ဟငျ ?
ဒီစာတှတေငျရတဲ့အကွောငျးက ဘဝမှာ(#ကူကယျရာမဲ့)ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အဓိပ်ပာယျကွီးကိုအခုမှ ကြှနျမကောငျးကောငျးကွီးခံစားနရေလို့ မှတျတမျးတငျထားတာပါ အခုအခြိနျထိ အမရေဲ့ညညျးသံအောကျမှာ ကြှနျမနှလုံးသားတှေ တစ စီကွမှေ”” ဖွတျသနျးရတဲ့အခကျအခဲဆုံးအခြိနျတှေ(၇)ရကျသားသမီးအားလုံးမကွုံရပါစနေဲ့😭🙏🏼🙏🏼အမအေ့တှကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုတောငျမမွငျနိုငျတော့တဲ့အခွအေနေ” လို့ ဝမျးနညျးစရာ အခွအေနတှေကေို မခံစားနိုငျတော့လို့ Facebook ပျေါမှာ ရငျဖှငျ့ထား ပါတယျနျော။